posted by မြင့်ဇေ @ 10:53 PM 1 comments
posted by မြင့်ဇေ @ 8:28 PM0comments
ကယန်းဒေသ ၁ (ခေါင်အကြောင်း တစေ့တစောင်း)
ညီမလေး ဆိုးဝတ်ထ်က လူမျိုးစုတွေအကြောင်းကိုရေးထားတာကို ဖတ်မိတော့မှ ကျနော် လည်း ရေးချင်စိတ် ပေါက်လာလို့ ကိုယ်ရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ လူမျိုးစု ဒေသကအကြောင်းတွေ ရေးလိုက်တာပါ။
ကျနော်တို့ စစ်ကြောင်းသွားတဲ့အချိန်က ၁၉၉၃ သင်္ကြန်ကာလ။ ကရင်ဒေသ တပ်မဟာ ၂ ကနေ ကယားပြည်နယ်ထဲ ကူးသွားတာ။ သွားတဲ့နေရာက ကယန်းဒေသ။ ၆ ရက်လောက် ခပ်ပြင်းပြင်း၊ သတိကြီးကြီးနဲ့ သွားခဲ့ရတယ်။ တိုက်ပွဲဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ခရီးစဉ်အကြောင်း သတင်း ပေါက်သွားမှာ သတိထားရလို့ပါ။
ကယန်းဒေသဆိုတာက ကယားပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ မန္တလေးတိုင်း၊ ကရင် ပြည်နယ် တို့ရဲ့ကြားမှာ ရှိတဲ့ဒေသတခုပါ။ အကျယ်အ၀န်းက သိပ်မကြီးမားသလို လူဦးရေ လည်း သိပ်မများ လှပါဘူး။ အများစုက ရိုမန်ကက်သလစ်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်ပြီး အဓိက အသက်ရှင်သန်မှုက တောင်ယာခုတ်ခြင်းပါပဲ။
ရောက်ရောက်ချင်း ကျနော်တို့ကို စမိတ်ဆက်တာက ခေါင်ရည်ပါ။ မသောက်ဘူးဘဲ သောက်လိုက်ကြတာ အရသာကလည်း ချိုတော့ ပါလာတဲ့ ရဲဘော်တိုင်းလိုလို မူးကြပါတယ်။ ကယန်းဒေသက အိမ်တအိမ် ရောက်ရင် ဧည့်သည်ရောက်တာနဲ့ ချပေးတာကလည်း ခေါင်ဗူးပါဘဲ။ နောက် ကလေးကို နို့ဖြတ်တဲ့ အခါကျရင်လည်း ခေါင်ပဲ သုံးပါတယ်။ ခေါင်ကို ကျနော်တို့စတွေ့ဘူးတဲ့ အချိန်တုန်းက အချိုတမျိုးဘဲရှိတယ် ထင်ခဲ့တာ။ နောက်ပိုင်းမှ သိတာ အခါးနဲ့ အချဉ်လည်းရှိတယ်။ တမင် ခါးအောင်၊ချိုအောင်၊ ချဉ်အောင် ချက်တာရယ်တော့ မဟုတ်ဘူး။ ချက်တဲ့အချိန်၊ ရေ၊ တစေးစတာတွေရဲ့ ကွာခြားချက်တွေကြောင့်ပါ။ ကယန်းလူမျိုးတွေအားလုံးဟာ ခေါင်ကို မက်မက်စက်စက် သောက်ကြပါတယ်။ တချို့ အသက်အရွယ် ကြီးတဲ့အဘိုးအို၊ အဘွားအိုတွေဆိုရင် တနေ့လုံးမှာ ထမင်းတောင်မစားတော့ပဲ ခေါင်ချည်းသက်သက် စုပ်ကြတာ။
သူတို့တော့ မသိဘူး၊ ကျနော်တို့ကတော့ ခေါင်များများစုပ်ရင်၊ သောက်ရင် အလွန့်ကို ဒူးညောင်းတယ်။ အဲဒါကဘယ်မှာသွားသိလဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ ကယန်းဒေသကို ၀င်ပြီး ၃ ရက်လောက်အကြာမှာ တခြားတပ်ဖွဲ့တခုက တိုက်ပွဲတပွဲတိုက်တယ်။ ယာဒို-လိပ်သိုကားလမ်းအကြားက ခဲချောင်းဆိုတဲ့ရွာမှာ ရှိတဲ့ နအဖ လှုပ်ရှားတပ်ဖွဲ့တခုကို။ အဲဒီမှာ နအဖဘက်က ၁၂ ယောက်လောက် ကျတယ်လို့ထင်တယ်။ သိပ်မမှတ်မိတော့ဘူး။ သေနတ်လည်း အားလုံးလိုလို ရလိုက်တယ်။ အဲဒီတိုက်တဲ့ တပ်ဖွဲ့နောက်ကို နအဖက စစ်ကြောင်းက ထိုးလိုက်လာတယ်။ သူတို့လိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းက ကျနော်တို့သွားမယ့်လမ်းကြောင်း တည့်တည့် ကျနေတယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ မသိကြဘူး။ အဲဒါနဲ့ ခရီးဆက်ထွက်တော့ ရွာတရွာ ရောက်သွားတယ်။ ထုံးစံအတိုင်းဘဲ ထမင်းချက်စား၊ အိမ်က ဧည့်ခံတဲ့ခေါင်တွေကို သောက်ပေါ့။ သတင်းမရသေးဘူး။ အဲဒါနဲ့ ခုနက တိုက်သွားတဲ့ တပ်ဖွဲ့နဲ့ ပေါင်းဖို့ဆက်ထွက်လာတာ မိနစ် ၂၀ လောက်ကြာတော့ ကျနော်တို့ဦးတည်သွားနေတဲ့ ရွာကရွာသားတွေ ထွက်ပြေးလာတာ တွေ့ရတယ်။ အဲဒီကျမှ သတင်းရတော့တာ။
ရန်သူဝင်နေပြီဆိုပြီး ပြေးပြောပြောသွားကြတယ်။ စက်ဖွင့်ပြီး အပေါ်ကတပ်ဖွဲ့ကို တိုက်သင့်၊ မတိုက်သင့် ညှိ တော့ မတိုက်ဘဲနဲ့ သူတို့ဆီဘဲ ဖြတ်လမ်းကလာဘို့ပြောတယ်။ အဲဒီမှာတင် ခေါင်တန်ခိုးနဲ့ တန်းတွေ့တော့ တာပဲ။ ကယန်းဒေသမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ တောင်ကြော ၂ခုရှိတယ်။ လက်ခုပ်ကြောနဲ့ ကင်းလိုက်ကြောဆိုပြီး။ မြင့်တဲ့နေရာမှာရော၊ အလျားပြန့်တဲ့နေရာမှာရော၊ တော်တော်များများတောင်တွေက အဲဒီကြောနဲ့ ဆက်စပ် နေတယ်။
ကျနော်တို့ကို လာဘို့ပြောတဲ့ လမ်းက ကင်းလိုက်ကြောရဲ့ အမတ်ဆုံးလို့ ဆိုရမယ့်နေရာမှာပါ။ မိုးကလည်း ဖွဲ ဖွဲဖွဲဖွဲနဲ့။ အဲဒါနဲ့ တက်ရောဆိုပါတော့။ စတက်တာနဲ့ ချောနေတဲ့ တောင်နံရံကနေ ကျနော်တက်လို့မရတာ တော်တော်ကြာတယ်။ ချောတာလည်း ပါတယ်။ ဒူးညောင်းတာလည်း ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၁၀မိနစ် လောက် ကြိုးစားလိုက်တော့ တက်လို့ရပါတယ်။ တောင်ထိပ်ရောက်ဘို့ တက်ရတာက ၄နာရီ လောက်ရှိတယ်။ တောင် လယ်လောက်မှာ လာဆင်းကြိုတဲ့ ရဲဘော်တွေက ကျောပိုးအိတ်၊ သေနတ်၊ အီးကွေးမန့် ယူသွားလို့သာ တော်တော့တယ်။
ခေါင်သောက်ခြင်းဟာ ကယန်းဒေသကို ထိခိုက်ပါတယ်။ ဘာလို့ဆိုတော့ ရိုးရာအနေနဲ့ သောက်လာခဲ့တာဆို တော့ တောင်ယာခုတ်ရင် စပါးတ၀က် ကောက်ညှင်းတ၀က်စိုက်ကြတယ်။ ဥပမာ - မျိုး ၈ တင်းစာ တောင် ယာခုတ်မယ် ဆိုရင် စပါးလေးတင်း၊ ကောက်ညှင်းလေးတင်းစိုက်တာမျိုးပါ။ ကောက်ညှင်းက ခေါင်ချက်ဘို့ပါ။
အဲဒီအချကျတော့ မိုးတွင်းရောက်ပြီဆိုရင် ဆန်ပြတ်လတ်မှုကြုံပြီး တော်တော် ဒုက္ခရောက်ပါတယ်။ ပြောင်းဖူး ခြောက်ပြုတ်စားရတာမျိုးတွေ လုပ်ရပါတယ်။
ခေါင်ရည်ကို ဘယ်လောက်သောက်သုံးသလဲဆိုရင် ဘယ်နေရာသွားသွား ခေါင်ဗူးပါတယ်။ လက်ထပ်ရင် လည်း ခေါင်အိုး ဘယ်လောက်ဆိုပြီး နှစ်ဘက်ကတင်ရတယ်။ မှောက်မှောက်မှားမှားကိစ္စတွေ ဖြစ်ရင်လည်း ပါ တာဘဲ။ ကျနော်ကိုတောင် မတော်ခဲ့ရတဲ့ ယောက္ခမက ငါးသွားဖမ်းတာ ဖြစ်ဖြစ်၊ တောလိုက်တာဖြစ်ဖြစ် အမြဲ ခေါင်တဗူး ထည့်ပေးစမြဲ။ (ဤသည်ကား ကြော်ငြာ)။
ကယန်းလူမျိုးတွေ စွဲစွဲမြဲမြဲသောက်တဲ့ ခေါင်ရည်က သုံးမျိုးရှိတယ်။ စုပ်ခေါင်၊ ခေါင်ကျရည်၊ ဖေါက်ခေါင်။ စုပ်ခေါင်ဆိုတာက ၀ါးပိုးဝါး ခပ်လတ်လတ်ကို တဆစ်ပိတ်ဖြတ်ပြီး အိုးထဲက ခေါင်ဖတ်ကို ခပ်သိတ်သိတ် ထည့် ရေနွေးဆူဆူလောင်းထည့် ပြီး ၀ါးတံလေးနဲ့ စုပ်ရတယ်။နေ့စဉ်သောက်သုံးတဲ့ ပုံစံ။ ခေါင်ကျရည်ဆိုတာ ခေါင်ဖတ်တွေ ထည့် ထားတဲ့ အိုးထဲက တစိမ့်စိမ့်ထွက်လာတဲ့ အရည်တွေကို ခပ်ပြီးသောက်တာပါ။ အမြင့် ဆုံး မူးစေတဲ့ အရာပေါ့။ တောင်ယာမီးရှို့တာတို့၊ သာရေးနာရေး ပွဲတွေမှာတော့ ဖေါက်ခေါင်ကို သုံးတာများပါ တယ်။ သူကတော့ စုပ်ခေါင် အကြီးစားမျိုးဆိုရမှာပါ။ ခေါင်ထည့်ထားတဲ့ စဉ့်အိုးထဲကို ရေဆူဆူတွေ အပြည့်လောင်းထည့်ပြီး ခွက်နဲ့သောက်တာပေ့ါ။ ကယန်းဒေသက ရွာတွေမှာ ဘယ်ရွာက ခေါင်က ကောင်းတယ်ဆိုတာရှိပါတယ်။ နာမည်ကြီးတာက လေဒူခေါင်ရွာက ခေါင်ပါ။ ပျားရည်လိုချိုပါတယ်။
ခေါင်ချက်တာက ကောက်ညှင်းစပါးကို ထောင်းပြီး ဖွဲနု၊ စပါးခွံတို့နဲ့ နယ်ရပါတယ်။ နောက် ပလိုင်းထဲထည့်ပြီး ရေလောင်းဆေး ဒါမှမဟုတ် ရေထွက်ပေါက်မှာ သွားဆေးရပါတယ်။ ပြီးရင် နည်းနည်းသွေ့သွားအောင် နေလှန်းရပါတယ်။ အခြောက်ခံရပါတယ်။ အဲဒိအချိန်မှာ တစေးကို ထောင်းပြီး ဖြူးရပါတယ်။ ပြီးရင် သမအောင်မွှေပြီး ပေါင်းအိုးနဲ့ ပေါင်းတယ်ပြီးရင် စဉ့်အိုးထဲ ထည့်ပြီး လေလုံအောင် ပိတ်တယ်။ အနိမ့်ဆုံး လေးငါးရက်ကြာအောင် ထားရပါတယ်။ ပြီးရင် သောက်လို့ရပါပြီ။
ရေးရင်းရေးရင်းနဲ့ ခေါက်ချက်တတ်တဲ့ ကယန်းမလေးကို လွမ်းလိုက်တာ။
posted by မြင့်ဇေ @ 10:29 PM0comments
posted by မြင့်ဇေ @ 9:20 PM3comments
ကျနော် တခါတလေ စာရေးဘို့ စဉ်းစားရင်းနဲ့ ဘာမှ အကြောင်းအရာ မယ်မယ်ရရ ရှာမရလို့ မရေးဖြစ်တော့ ပြန်ဘူး။ အဲဒီအခါကျရင် ဆရာ မြ ပြန်တဲ့ `ပါရီကျဆုံးခန်း´ထဲက ဇာတ်ကောင်တဦးဖြစ်တဲ့ `လူဆန်း´ ကိုသွား သတိရတယ်။ အဲဒီထဲမှာ လူဆန်းက စာတအုပ် နှစ်အုပ် ရေးပြီး နာမည်ကြီးသွားတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ထပ် မရေးနိုင်တော့ဘူး။ အဲဒါကို ဘာနဲ့ဥပမာ ပေးထားလဲဆိုတော့ အရည်ညှစ်ပြီးသား သံပုရာခွံဖြစ်သွားပြီ။ နောက်ထပ် ညှစ်ထုတ်ဖို့ မကျန်တော့ ဆိုပြီး။ ဖတ်တုန်းကတော့ ဒီအဖွဲ့လေးကို ကြိုက်လိုက်တာ။ အခု ကိုယ်နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့  မရေးနိုင်တဲ့ အဖြစ်ကို ကြုံရတော့မှပဲ `ဟိုက်၊ ငါလည်း သံပုရာခွံ ဖြစ်နေပါရောလား´ ဆိုပြီးတွေးမိတယ်။ အဲဒါနဲ့ ငယ်စဉ်က ဆက်စပ်ခဲ့ရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က အဖြစ်လေးတွေ၊ လွဲချော်မှုလေးတွေကို ပြန်ရေးရင်ကောင်းမလားဆိုပြီး ဒီနာမည်လေး ပေးလိုက်တာပါ။ လက်ကျန် သံပုရာရည်လေးတွေကို ကြိတ်စက်ထဲ ထည့်ကြိတ်တဲ့ သဘောပေါ့ဗျာ။
ကျနော် ကိုးတန်းကျောင်းသားဘ၀တုန်းက ၁၉၈၆ လောက်ကပေ့ါ။ မြန်မာစာ ဆရာဒိုးဆီမှာ ကျူရှင်ယူခဲ့တယ်။ အမေကတောင် ပြောသေးတယ်။ ` ဘယ့်နှယ့်တော်။ မြန်မာစာကို ကျူရှင် ယူရတယ်လို့၊ ကြား ကြားဖူးပေါင်´ ဆိုပြီး ။ ဒါပေမယ့် မိခင်ဆိုတာကလည်း သားသမီးအလိုကို မတတ်နိုင်ရင်သာ ရှိရမယ်။ တတ်နိုင်ရင်တော့ လုပ်ပေးကြတာချည်း မဟုတ်လား၊ တက်ရရောဆိုပါတော့။
အမှန်ကတော့ ကျနော်က မြန်မာစာ အညံ့ချည်း မဟုတ်ဘူးဗျ။ ပုံမှန် အောင်တဲ့အဆင့်ထက်တော့ သာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသက်အရွယ်ကလည်း လူပျိုပေါက်စ။ ရှစ်တန်းတုန်းကလည်း အိမ်က သိပ်ထွက်ရတာ မဟုတ်တော့ ထွက်ပေါက်ရှာတာပါ။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကလည်း ထိုင်တတ်နေပြီ။ ဆေးလိပ်လေးဘာလေးလည်း မတောက် တခေါက် ဖွာတတ်နေပြီ။ လမ်းများချင်တာပေါ့ဗျာ။
အဲဒါနဲ့ ကျူရှင်တက်ပြီးလို့ အိမ်ပြန်ရင် ကီလီဘက်က ပတ်ပြန်ရတယ်။ အဲဒီလို ပြန်တိုင်း ဘတ်စ်ကားစီးတော့ အသက်ကြီးငယ်မရွေး လူတွေရဲ့ နေ့စဉ် ဘ၀တွေ၊ မောဟိုက်နေတဲ့ အသက်ရှူသံတွေ၊ ညှိုးနွမ်းနေတဲ့ အိမ်အပြန်ညနေတွေကို ကြုံရတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီကာလရဲ့ စီးပွားရေးအရ ဆင်းရဲသူနဲ့ ချမ်းသာသူ ကြား ကွာဟမှုအရည်အတွက်က အခုခေတ်လို အရမ်း မကြီးမားသေးဘူး။ နောက် ကီလီတ၀ိုက် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းတွေကလည်း မြို့တော်လို့ ပြောရင်တောင် ယုံစရာ မဖြစ်တဲ့ အနေအထားမျိုးတွေ။ မိုးရွာရင် တော်တော်ဆိုးတယ်။ အဲဒီအချိန် ကီလီဈေးနားမှာ မိလ်လာလိုင်းက ပေါက်ပြဲနေတယ်။ မိုးတွင်းခါများဆို ရေကြီးရင် တော်တော် စိတ်ပျက်ဘို့ကောင်းတယ်။
အဲဒီလို မြင်ကွင်းတွေကို ကျူရှင်က ပြန်လာတိုင်းမြင်ရတာများတော့ အသိစိတ်မှာ စွဲနေတယ်။ အဲဒီအချိန် မှာလည်း စာကတော်တော့်ကို အစုံ ဖတ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ ငယ်ရွယ်တဲ့ အသိစိတ်နဲ့ စာအုပ်ထဲကပါတဲ့ အရာတွေကို နှိုင်းယှဉ်စဉ်းစားနေချိန်လေ။
ဖြစ်ချင်တော့ တနေ့ ကျောင်းက မြန်မာစာဆရာမက စာစီစာကုံး တပုဒ် ရေးခိုင်းတယ်။ လေ့ကျင့်တဲ့အနေနဲ့ပါ။ ခေါင်းစဉ်က ` ကျောင်းသွားကျောင်းပြန် မြင်ကွင်းများ´ ပါ။ အိမ်စာအဖြစ်နဲ့ ပေးလိုက်တာပါ။ ကျနော်လည်း စိတ်ထဲမှာ စွဲနေတဲ့အရာတွေကို ရေးခွင့်ရပြီဆိုပြီးတော့ အမှန်တကယ်ကို ဖိဖိစီးစီး ရေးချတော့တာပဲ။ ကီလီ လမ်းက ကိစ္စရော၊ ဘတ်စ်ကားပေါ်က နေ့စဉ်ဘ၀တွေရော၊ ပြီးတော့ စာအုပ်ထဲက စကားလုံးတွေကိုပါ အတုံးလိုက်အတစ်လိုက် အသုံးချပြီး ရေးလိုက်တာပါ။ နောက်နေ့ စာအုပ်တွေကို ထပ်ပြီး ဆရာမ စစ်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ကျနော့်ကို ခေါ်မေးပါတယ်။ ဘယ်သူရေးပေးတာလဲပေါ့။ ကိုယ့်ဘာသာရေးတာလို့ ပြန်ပြောတော့ ဆရာမက `သားရေးတဲ့ စာစီစာကုံးထဲမှာ တချို့ စာလုံးတွေက ကျောင်းသားတွေ မသုံးသင့်တဲ့ အသုံးအနှုံးတွေ ပါနေတယ် ´ ပြန်ပြောတယ်။ `အဲဒါတော့ ကျနော်မသိဘူးဆရာမ။ ကျနော် ကျောင်းသွားကျောင်းပြန်မှာ တကယ်တွေ့ရတဲ့ အကြောင်းတွေကို ပြန်ရေးထားတာဘဲ။ နောက် တချို့ စာလုံးတွေကတော့ ကျနော်ဖတ်ဘူးတဲ့ စာအုပ်တွေထဲမှာ ပါတဲ့ဟာတွေကို ကိုက်ညီမယ်ထင်ပြီး သုံးခဲ့တာပါ။´ အဲဒီမှာတင် ဆရာမက ကျနော့်ကို `နောက်စာစီစာကုံးတွေကျရင် အဲဒီလို စာလုံးမျုိးတွေ သုံးမရေးနဲ့။ စာစီစာကုံးရေးတာက ကောင်းပေမယ့် အဲဒီ ဟာတွေကြောင့် အမှတ်သိပ်ရမှာ မဟုတ်ဘူး´ လို့ပြောပြိး ပြန်ထိုင်ခိုင်းတယ်။
ကျနော်လည်း အူကြောင်ကြောင်နဲ့ ပြန်ထိုင်ရင်း စဉ်းစားမိတယ်။ ဘာကြောင့် အဲဒီစာလုံးတွေကို မသုံးစေချင် တာလဲ။ စဥ်းစားရင်းနဲ့ ရှစ်တန်းတုန်းကလည်း တခါကြုံဘူးတာ ပြန်အမှတ်ရသွားတယ်။ အဲဒီတုန်းက ငယ် သေးတော့ သေသေချာချာ မတွေးမိခဲ့ဘူး။ ခေါင်းစဉ်က`သင်၏ ရည်မှန်းချက်´ ဆိုတော့ ကျနော်က ရေးချ လိုက်တာ
`ဘ၀ဆိုသည်မှာ မိမိဖြစ်ချင်သော်လည်း ဖြစ်ချင်သည့်အတိုင်း မဖြစ်နိုင်ပေ။ အကန့်အသတ်များစွာဖြင့် အထိန်းခံထားရသည်။ အကယ်၍ ကျနော်သည် ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်ဦးတော့ မဖြစ်စေနိုင်သည့် အကန့်အသတ် များက ရည်မှန်းချက်ကို ဟန်တားထားသည်´
စသဖြင့် ဘာညာဘာညာ ရေးတုန်းကလည်း အမှတ် တော်တော်နည်းခဲ့တယ်။ (စကားချပ်- အခုထိလည်း အမှတ်တော်တော်နည်းသေးတယ်။ မမှတ်သေးတာကို ဆိုလိုတာပါ)။ ထားတော့ - ကျနော် စဉ်းစားမရ။ အိမ်ပြန်ရောက်ချိန်မှ အဖေ့ကို မေးကြည့်တော့ `အဲဒါက နိုင်ငံရေးစကားလုံးတွေမို့လို့ သားရ´။ အဲဒီမှာတင် ပို၍ ရှုပ်သွားခဲ့တယ်။ နိုင်ငံရေးစကားလုံးတွေ ဆိုတော့ စာရေးဆရာတွေကရော ဘာလို့ သုံးကြတာလဲ။ ကျောင်းသား တွေကရော ဒါသုံးလို့ စာမေးပွဲမှာ ဘာဖြစ်လို့ အမှတ်လျော့ခံရတာလဲ။ ကျောင်းသားတွေကျတော့ မသုံးရဘူးလို့ သတ်မှတ်ထားခဲ့သလား။ အတွေးများက လုံးလည်ချာလည်နှင့် အဖြေကတော့မရ။
၈၈၈၈ ကို နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ ကြုံလိုက်ရမှ ကျနော် နည်းနည်းသဘောပေါက်လာတယ်။ ကျနော်တို့ကို ဘာကြောင့် မသိစေချင်မှန်း၊ မသုံးစေချင်မှန်း။ အာဏာကို လက်ထဲ မြဲမြံစွာ ကိုင်ထားနိုင်ရေးရည်စူးပြီး ကျနော်တို့  ကို မသိစေချင်ခဲ့တာပါလား ။ ကျနော်တို့ ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ခေတ်ဆီက ကျနော်တို့ စုတ်ယူရရှိခဲ့တဲ့ အရာအများစုဟာ မသိစေချင်တာ တွေက သိရမယ့် အရာတွေဖြစ်ပြီး၊ မသိသင့်တဲ့ အရာတွေကို သိစေခဲ့ပါလား ဆိုတာလည်း တွေးမိပါရဲ့။ ဘယ်ကလောက်များ လူ့သမိုင်းကို နောက်ပြန်တွန်းပို့စေခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်လဲ။ အဲဒီအကြောင်းလေး ပြန်တွေးမိတာပါ။
ကျနော်ဒီထဲက ရတာတခုကတော့ အရာအားလုံးကို ပိတ်ပင်ထားပေမယ့် လေ့လာဘို့ အခွင့်အလမ်းတွေကို ရတဲ့အခြေအနေမှာ နောင်မျိုးဆက်တွေအတွက် ချန်ထားခဲ့ဘို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုပါ၊ ဒါမှလည်း သမိုင်းက ကြောင်လိမ်လှေကားလို.. တိုင်းပြည်ကလည်း စစ်မှန်တဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းဆီ ချဉ်းကပ်နိုင်မှာပါ။
posted by မြင့်ဇေ @ 8:30 PM 1 comments
“ငါ့သားများစစ်ထဲဝင်မယ်ဆိုရင်လေ... စစ်တပ်ဆိုတာယောင်္ကျားကောင်း၊ ယောင်္ကျားမြတ်တို့ကို မွေးဖွားပေးတဲ့ နေရာဖြစ်တယ်” အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့အဆိုအမိန့်ကို ကျက်သရေရှိပြီး တည်ကြည် ခန့်ညားတဲ့ လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးရဲ့ လူတရပ်ခန့်အရွယ် ဓါတ်ပုံကြီးရဲ့အောက်မှာ အနီရောင်ကတ္တီပါပေါ် ရွှေဝါ ရောင်စာလုံးတွေနဲ့ ရေးသားထားတယ်။ မဆလခေတ် စစ်သားစုဆောင်းရေးတပ်များမှာ မြင်တွေ့နေကျ မြင်ကွင်း ဖြစ်တယ်။ “...အမယ်မင်းထွားလိုက်တာ၊.စစ်သားးကြီးလုံးလုံး ၊ဗိုလ်မှူးကြီးရှုံးလောက်ရဲ့.ပုခုံးနဲ့လက်ပြင်၊ ကျောခြင်က သံချောင်း၊ တနှစ်တွင်းမှာ ချက်ခြင်းပဲပြောင်းရော့.......”
“ငါ့သားများစစ်ထဲဝင်မယ်ဆိုရင်လေ... စစ်တပ်ဆိုတာယောင်္ကျားကောင်း၊ ယောင်္ကျားမြတ်တို့ကို မွေးဖွားပေးတဲ့ နေရာဖြစ်တယ်” အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့အဆိုအမိန့်ကို ကျက်သရေရှိပြီး တည်ကြည် ခန့်ညားတဲ့ လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးရဲ့ လူတရပ်ခန့်အရွယ် ဓါတ်ပုံကြီးရဲ့အောက်မှာ အနီရောင်ကတ္တီပါပေါ် ရွှေဝါ ရောင်စာလုံးတွေနဲ့ ရေးသားထားတယ်။ မဆလခေတ် စစ်သားစုဆောင်းရေးတပ်များမှာ မြင်တွေ့နေကျ မြင်ကွင်း ဖြစ်တယ်။ “...အမယ်မင်းထွားလိုက်တာ၊.စစ်သားးကြီးလုံးလုံး ၊ဗိုလ်မှူးကြီးရှုံးလောက်ရဲ့.ပုခုံးနဲ့လက်ပြင်၊ ကျောခြင်က သံချောင်း၊ တနှစ်တွင်းမှာ ချက်ခြင်းပဲပြောင်းရော့.......” ကဗျာ၊လင်္ကာတို့ ကလဲ စစ်သားဖြစ်မှ၊ စစ်တိုက်ဖူးမှသာ ယောင်္ကျားပီသတယ်။ လူတောတိုး၊လူရာဝင်တယ်ဆိုတာ မြန်မာပြည်သူတို့ အသဲနှလုံးထဲမှာ နစ်ဝင်စွဲညိနေတယ်။ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုအောင်ဆန်း၊ သခင် အောင်ဆန်းလို့ခေါ် ရတာ မလေးနက်ဘူး၊ ပေါ့ပျက်ပျက်ဖြစ်လို့ “ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း”လို့ ခေါ်လိုက်ရမှ အားပါးတရရှိခဲ့တာ။ အနော်ရထာ၊ ကျန်စစ်သား၊ တပင်ရွှေထီး၊ ဘုရင့်နောင်၊ အလောင်းဘုရား၊ မဟာဗန္ဓုလ စတဲ့ရာဇဝင်ထဲက မြန်မာ့စစ်သူကြီး၊ စစ်သူရဲကောင်းတို့ရဲ့ ရဲစွမ်းသတ္တိပုံရိပ်တွေက ငယ်ငယ်ကတည်းက ဒဏ္ဍာရီ အိပ်ရာဝင်ပုံပြင်လေးများအဖြစ် အမှတ်ရ တမ်းတနေလေ့ရှိခဲ့ကြတယ်။ ခေတ်အဆက်ဆက် ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်တွေဖြစ်လို့ မနာလို၊ ဝန်တိုနဲ့ အားကျ ခဲ့မိသေးတယ်။ ခုတော့လဲ ဒါတွေဟာ ကမ္ဘာခြားခဲ့ပြီလား။
၁၉၈၀ခုနှစ်လောက်က ဧရာဝတီတိုင်း၊ ကျုံပျော်မြို့၊ ခလရ(၃၆)ကို အမှတ်(၅)တိုင်းဗဟိုလေ့ကျင့်ရေးစခန်း (ရွှေမြင်တင်၊ ပုသိမ်မြို့)က လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းဆင်းရဲဘော်သစ်တွေရောက်လာတယ်။ အဲသည်ရဲဘော်သစ် တွေထဲမှာ အသားဖြူဖြူနုနုချောချော ရန်ကုန်သားတဦးဖြစ်တဲ့ တပ်သားရွှေသွင် တယောက်ကံဆိုးချင်တော့ ခပ်ညံ့ညံ့တပ်ခွဲ(၄)မှာ တာဝန်ကျတယ်။ အသက်ကလဲ (၁၈)နှစ်-(၁၉)နှစ်အရွယ်၊ (၁၀)တန်းနှစ်ခါကျလို့ အိမ်မပြန်ရဲတာနဲ့ စစ်တပ်ထဲကိုမျက်စိလည်ရောက်လာတဲ့ အိမ်ပြေးကျောင်းသားလူငယ် လေးတယောက် ဖြစ်တယ်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက အစ်မ(၅)ယောက်ကြားထဲမှာ ကြီးပြင်းလာတဲ့ တဦးတည်းသော အငယ်ဆုံးသား ယောင်္ကျားလေးဖြစ်လို့ ချွဲတာ၊ နွဲ့တာအကျင့်ပါနေတတ်တယ်။
ခွဲ(၄)တပ်ခွဲမှူး ဗိုလ်ကြီးအောင်သန်း(ယာယီတပ်ခွဲမှူး၊ဗိုလ်မှူး) သင်တန်းသွားနေတော့ တပ်ခွဲမှာစီနီယာဖြစ်တဲ့ “ဝါးကားတောင်မှ သူ့ရှေ့ကဖြတ်မမောင်းရဲဘူးလို့” နံမည်ဆိုးနဲ့နံမည်ကြီးတဲ့ ဗိုလ်ကြီးတင်ယု ကတပ်ခွဲမှူး တာဝန်ယူထားရတယ်။ တပ်ခွဲကလစာကြပ်ရဲ့ မိန်းမနဲ့ခြင်ထောင်ထဲမှာ ပက်ပင်းမိလို့ ဟိုးလေး တကျော်ကျော် ဖြစ်ခဲ့သေးတယ်။ တပ်ခွဲမှာရှိတဲ့ ဆရာတွေ၊ ရဲဘော်တွေရဲ့မိန်းမတွေကို လစ်ရင်လစ်သလိုချောင်း မြောင်းကြံစည် တတ်လို့ လမ်းတွေ့ရင်တောင်နှုတ်မဆက်ရဲ၊ အိမ်အလည်ထမင်းစားမဖိတ်ရဲပါဘူး။ ရှေ့တန်းရွာတွေ ကိုရောက်ရင် လဲအပျိုအရွယ်၊ ခပ်ငယ်ငယ်မိန်းမများများရှိတဲ့ အိမ်တွေမှာခွဲရုံးထိုင်လေ့ရှိတယ်။ အပျို၊အအိုမရှောင်လို့ အမျိုး သမီးပေါ်တာတွေကတော့ မလွတ်သလောက်ပါဘဲ။ (ရှေ့တန်းစစ်ဆင်ရေးဒေသရွာများတွင် စစ်ဆင်ရေး အထမ်း သမားပေါ်တာဆွဲလေ့ရှိသဖြင့် စစ်ကြောင်းမလာခင် ရွာထဲကယောင်္ကျားမှန်သမျှလွတ်ရာသို့ ရှောင်နေတတ်ကြရာ ရွာထဲတွင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည့် အမျိုးသမီးမိန်းမများကိုပင် အထမ်းသမားပေါ်တာအဖြစ် ခေါ်သုံးလေ့ရှိပါသည်။)
၁၉၈၀ခုနှစ်၊ဆောင်းရာသီ၊ ကချင်ပြည်နယ်၊မြစ်ကြီးနားမြို့မှာ စစ်ဆင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှူး ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းရီနဲ့ ဗိုလ်ချုပ် တင်စိန်တို့က ဦးဆောင်ပြီး KIO နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲလုပ်တယ်။ လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်စွန့်ရေး၊ လက်နက်ချ ရေးကိုသာ အဓိကဇောင်းပေးဆွေးနွေးတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲပျက်တယ်။ တဆက်တည်းမှာပဲ ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ် သင်တန်းဆင်း(၂၀၀၀)လောက် အိန္ဒိယနယ်စပ်အနောက်ဘက်မှ တရုတ်ပြည်နယ်စပ်အရှေ့ဘက် တလွှားထိ ဖြတ်သန်းသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းအရ ပိတ်ဆို့ရေးတွေလုပ်နေရတယ်။ အဲသည်ကာတုံးက နတခတပ် (ဧရာဝတီတိုင်း)များဟာ မပခ(ကချင်ပြည်နယ်) စစ်ဆင်ရေးခွင်များမှာ ရှေ့တန်းထွက်လှုပ်ရှားကြရတယ်။ ခလရ(၃၆) စစ်ကြောင်းရုံးက မော်လူး၊မော်ဟန်မှာရုံးထိုင်ပြီး နမ့်စီအောင်၊နဘားကနေ ကာဒူ၊မိုးညှင်းထိ ပိတ်ဆို့ရေး တာဝန်ယူရတယ်။ စစ်ကြောင်း(၂)လက်အောက်ခံ ခွဲ(၄)က အင်းတော်ကြီးနားက လုံးတုံအနီး ရွှေတွင်းတဝိုက်မှာ လှုပ်ရှားတာဝန်ယူထားရတယ်။ ရွာထဲကို လုံးဝမဝင်ထွက်ရလို့ အမိန့်ထုတ်ထားတယ်။ ဗျူဟာ၊ တိုင်း၊ တပ်မသာမက ကစထနဲ့တိုက်ရိုက်အမိန့်ပေး ညွန်ကြားချက်တွေရှိတယ်။ စစ်ဆင်ရေးလှုပ်ရှားမှု သတင်း မပေါက်ကြားရအောင် ရွားနားကိုတောင်မှ ကပ်ခွင့်မပေးဘူး။
ရဲဘော်သစ်တပ်သားရွှေသွင်ကို ခလရ(၃၆)၊ ခွဲ(၄)ရဲ့တပ်ခွဲရုံးမှာခေါ်ထားတယ်။ တပ်ခွဲမှူးဗိုလ်ကြီးတင်ယုရဲ့ ဘက်စမင်း လုပ်ရတယ်။တပ်ခွဲမှူးအတွက် အဝတ်လျှော်၊ ထမင်းခူးခပ်ကျွေးရုံတင်မကဘူး နှိပ်နယ်နင်းပေး ခြင်ထောင်ပါထောင်ပေးရတယ်။ ပိုဆိုးတာက တပ်ခွဲမှူးနဲ့လဲ တခြင်ထောင်ထဲမှာ လိုက်အိပ်ပေးရတယ်။ တနေ့တော့ ဝါးကားမရှောင် တပ်ခွဲမှူးဗိုလ်ကြီးတင်ယုကြောင့် အတွေ့အကြုံနုနုနဲ့ကနွဲ့ကယနေတတ်တဲ့ ရဲဘော်သစ်ကလေးတဦးဟာ ယောင်္ကျားချင်းသံဝါဟပြုကျင့်တာခံရလို့ လုံးရာကပြားလို့ရေတိမ်နစ်ခံခဲ့ရတယ်။ နောက်နေ့မှာတော့ ရှက်လဲရှက်၊ ကြောက်လဲကြောက်တာနဲ့ ကိုယ့်သေနတ်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပစ်သတ်လို့ အသေခံ သွားခဲ့တယ်။ ဒီအဖြစ်ဆိုးကို ကြားသိရတဲ့ ဆရာတွေ၊ ရဲဘော်တွေဟာ ရင်ထုမနာဖြစ်ရတဲ့အထဲ “ငှက်ဖျားရောဂါဖေါက်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေသွားတယ်”လို့ အထက်ဌာနကို ကြေးနန်းလိမ်ရိုက်တာကို ဒေါသထွက်လို့ ပေါက်ကွဲတော့မဲ့ဆဲဆဲမှာ စစ်ကြောင်း(၂)မှူး ဗိုလ်မှူးမောင်မောင် (ရုပ်ရှင်မင်းသမီး ခိုင်သင်းကြည် ၏ဖခင်) လာထိမ်းသိမ်းပေးပြီး တပ်ရင်းမှူး ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး သိမ်းထူးရှိတဲ့ စစ်ကြောင်း(၁)ကို ပြောင်းပေးလိုက် တယ်။ ဒီလိုမှမလုပ်ရင်တော့ ရှေ့တန်းတွေမှာထုံးစံလိုဖြစ်နေတဲ့ နောက်စေ့ ကိုကျည်ဆံမှန်တဲ့ အရာရှိတဦး ထပ်တိုးသွားပါလိမ့်မယ်။
ဒီဗိုလ်ကြီးတင်ယုဟာ မဆလဗဟိုကော်မတီဝင် ပါတီဌာနကြီးမှူးတစ်ယောက်ရဲ့သားဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်။ အဲသည်တုံးက လူကြီးသားသမီးအတော်တော်များများကို စစ်တပ်ထဲမှာအရာရှိလုပ်ခိုင်းလေ့ ရှိတော့ ဆိုးချင်တိုင်း ဆိုး၊ ရမ်းချင်တိုင်းရမ်းလို့နေတတ်ကြပါတယ်။ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်ထင်ရဲ့သား ဗိုလ်ကြီးအောင်ကျော်(တေဇ-၉)၊ တိုင်းမှူးဗိုလ်ချုပ်အေးသောင်ရဲ့သား ဗိုလ်ကြီးတင်ထွန်းအေး( စစ်တက္ကသိုလ်-၂၂) ၊ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင် ဗိုလ်မှူးကြီးဖေါ်ယူခါးရဲ့သား ဗိုလ်ကြီးဖီးလစ်ခါးတို့ညီအကို၊ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေရဲ့တူ ဗိုလ်ကြီးတင်ထွန်းဝင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ရဲကျော်ရဲ့သား နန္ဒအောင်စသည်ဖြင့် အများကြီးပဲ ဗိုလ်သင်တန်းကို အောင်ပေးလို့ စစ်ဗိုလ်လုပ်စားနေကြတယ်။ နေ့ချင်းညချင်းပြန်တန်းဝင်အရာရှိကြီးတွေအမြန်ဖြစ်လို့ အခွင့်ထူး ခံစားခွင့်ရှိကြတယ်။ အချို့ဆို အောက်ခြေရဲဘော်တွေလောက်တောင်အဆင့်မရှိဘဲ မူးယစ်ဆေးတောင်စွဲနေ ကြတယ်။
“နေ့မြင်ညပျောက်” တပ်မ(၄၄)ကရဲဘော်တွေရဲ့ အသက်ပေါင်းများစွာစတေးပြီး နတခတိုင်းမှူးဖြစ်လာတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မြင့်အောင်ဟာ ၈၈-အရေးတော်ပုံအပြီးမှာ ဖက်စစ်ဝါဒီပီပီ အစွယ်ထုတ်ပြလို့ အရပ်သား ဝန်ထမ်းတွေပြည်သူတွေကို ပုသိမ်မြို့လယ်မှာ နေပူထဲနေလှမ်းပြီး ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တာ ပြည်သူအားလုံး မျက်မြင် ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်။ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဓနုဖြူမြို့စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်မှာလဲ တိုင်းမှူးရဲ့ကိုယ်ရေးအရာရှိ ဗိုလ်ကြီးမြင့်ဦး(ဖနောင့်တိုမြင့်ဦးဟုခေါ်တွင်) ကို ဒေါ်စု လုပ်ကြံဖို့လျှို့ဝှက်အမိန့်ပေးခဲ့ သေးတယ်။ မြင့်အောင်လိုဆိုးသွမ်းရမ်းကားတဲ့ ဖက်စစ်အရာရှိကြီးတွေရှိသလို “ကိုင်းပင်ကြီးကကျွန်းပင်ကြီးကိုမှီ ပြီးကျွန်းပင်ကြီးကလဲကိုင်းပင်ကိုမှီတယ်”တို့၊ “ဝယ်သာ(weather) မကောင်းရင်ဖြုတ်လဲလိုက်”လို့ မူလတန်း ခလေးလောက်တောင်မှအသိဥာဏ်ဗဟုသုတမရှိတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မျိုးညွန့်လို ခပ်နုံနုံခပ်ညံ့ညံ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ် အရာရှိတွေ အုပ်ချုပ်နေတော့ တိုင်းပြည်မှာလဲ မူဆလင်ဘာသာဝင်မျိုးညွန့်(စာရေးဆရာ မောင်သော်က ရဲ့ညီဝမ်းကွဲတော်သူ) ကိုသာသနာရေးဝန်ကြီးခန့်လို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဘုန်းတော်ကြီးတွေကို ဟိုဟာလုပ်ခိုင်း၊ သည်ဟာလုပ်ခိုင်းနဲ့ ပြည်သူလူထုကို စော်ကားလိုက်ပါသေးတယ်။
နတခတိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်မြင့်အောင်လို ခပ်ဆိုးဆိုးခပ်ရမ်းရမ်းဖက်စစ်အရာရှိကြီးတွေ၊ ရန်ကုန်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်မျိုးညွန့်လို အရည်အသွေးမမီတဲ့ ခပ်ညံ့ညံ့အရာရှိကြီးတွေရှိသလို တပ်မတော်လေ့ကျင့်ရေးအရာရှိချုပ် ဟောင်းဗိုလ်မှူးကြီးလူမော်လို ရိုးသားဖြောင့်မတ်တိကျတဲ့ စစ်သားကောင်းကြီးတွေလဲရှိခဲ့ပါသေးတယ်။အရပ်၅ ပေ ခန့်ခပ်ပုပု ဗိုလ်မှူးကြီးလူမော်ဟာ တပ်မတော်ကပေးတဲ့ စစ်ကားကို တသက်လုံးသူ့မိသားစုအတွက် ကိုယ်ပိုင်မသုံး ခဲ့ပါဘူး။ မိသားစုကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စအတွက် စစ်ကားကိုမသုံးဘဲ လုပ်ငန်းတာဝန်အတွက်သာအသုံးပြုပြီး ပိုတဲ့ ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီများကို နိုင်ငံတော်သို့ပြန်လည်အပ်နှံတဲ့အတွက် ဒရိုင်ဘာရဲဘော်ကားသမားအတွက် အကြံအဖန်မရလို့ စိတ်ညစ်ရပေမဲ့ တသက်လုံးစစ်သက်(၄၀)နှစ်လောက် မပျက်မကွက်ကျင့်သုံးလာခဲ့တဲ့အတွက် မည်သူမဆို မလေးစားဘဲမနေနိုင်လောက်အောင် ရိုးသားတဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားကို အသိအမှတ်ပြုကြရပါတယ်။ အချို့အရာရှိငယ်တွေလဲ အိမ်ကိုငွေပြန်မှာလို့ အောက်ခြေရဲဘော်တွေရဲ့အခက်အခဲများကို လက်ရေတပြင်တည်း ကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြလို့ အိမ်ကအဖေ၊အမေတို့ရဲ့ ညူစူခြင်းတောင်မှခံရပါသေးတယ်။
၁၉၈၂-၈၃ ဝန်းကျင်က ရန်ကုန်မြို့မှာ နိုင်ငံတော်ကဖွင့်တဲ့ “ပျားဂေဟာကြက်ကျော်” အရောင်းဆိုင်များ အတော် ခေတ်စားခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့်နယ်တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေက မွေးမြူရေးကြက်များကို ရန်ကုန်မြို့သို့ပို့ပေးရပါ တယ်။ နတခ(ပုသိမ်)မှ ရန်ကုန်သို့ဇက်သင်္ဘောကြီးများဖြင့် သယ်ဆောင်ရာတွင်မြောင်းမြမြို့မှာ ညအိပ်ရပ်နား လေ့ ရှိပါတယ်။ မှောင်ရီပျိုးပြမြောင်းမြဆိပ်ကမ်းကိုကပ်တော့ “အာမီ(Army)ရမယ်၊ တောရမယ်”လို့ ဈေးရောင်း သလို လာအော်နေတာနဲ့ “အာမီ(Army) လိုချင်တယ်”ဆိုပြီး သူတို့ခေါ်နေတဲ့ နောက်ကိုလိုက်သွားတော့ သနပ်ခါး ပါးကွက်ကြားနဲ့ ညိုညိုတောင့်တောင့်အမျိုးသမီးအုပ်စုဆီကိုခေါ်ပြတယ်။ ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ အာမီ(Army Rum) မဟုတ်လို့ တစုံတခုမှားယွင်းနေပြီဆိုတာကိုတော့ ခံစားလိုက်မိတယ်။ ခေါ်လာတဲ့သူကလဲ ရွှမ်းရွှမ်းဝေ အောင် ညွှန်းနေလိုက်ပါသေးတယ်။ “အမှန်အကန်တွေပါ။ သူတို့ယောင်္ကျားတွေ ရှေ့တန်းထွက်သွားတာတနှစ် ကျော်ပါပြီ။ ဈေးကောင်းရမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်တွေကိုတောင်မှ ရွတ်ပြလို့ရပါတယ်။ လစာနဲ့ရိက္ခာ ရှေ့တန်းပါသွားလို့ တခါတလေမှသာလုပ်ကိုင်စားကြတာပါ။ ရောဂါကင်းရှင်းစေရမယ်။ အာမခံပါတယ်” ရှက်လဲရှက်၊ ဒေါသလဲထွက်လို့ ခေါ်လာတဲ့သူရဲ့မျက်နှာကို ဆွဲထိုးပစ်လိုက်မိတယ်။ အတူပါလာတဲ့တပည့်ဖြစ်သူ ကလဲ ပစ္စတိုဆွဲထုတ်လိုက်တော့ သူတို့အဖွဲ့အားလုံးထွက်ပြေးသွားကြပါတယ်။ ရှေ့တန်းမှာစခန်းအချိန်းအပြောင်း လုပ်လေ့ရှိတဲ့ ခလရ(၉၃)က ရဲဘော်တွေရဲ့မျက်နှာတွေကို ပြန်မြင်ယောင်မိတယ်။ သူတို့ကိုယ်စားလဲရင်နာမိ တယ်။ ဒီအဖြစ်ဆိုးမှာ ဘယ်သူ့ကိုနာကျည်းရမှန်းမသိဘဲ ဒေါသထွက်လို့ မျက်ရည်ကျမိတယ်။
ခြေလျင်စစ်သားတွေဟာ ရှေ့တန်းတွေမှာအနေများလို့ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်၊ သေဖေါ်ရှင်ဖက်ရဲဘော်တွေကို အိမ်က မိန်းမထက် ပိုချစ်တတ်ကြပါတယ်။ လူပျိုဘဝကဆို သူငယ်ချင်းအားလုံးရဲ့ရတဲ့လစာတွေကို ခြင်ထောင်အမိုး ပေါ်မှာ စုတင်ထားပြီး အားလုံးစိတ်ကြိုက်သုံးစွဲတတ်ကြတယ်။ တယောက်နဲ့တယောက်နှမျောတွန့်တိုခြင်းလဲ လုံးဝမရှိကြဘူး။ အရပ်ဝတ်အင်္ကျီ၊ လုံခြည်ဆိုရင်လဲ ကြုံသလိုလူကယူဝတ်တတ်ကြလို့ ဘယ်သူ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်း လို့ကိုပြောလို့မရဘူး၊ အားလုံးဘုံပိုင်ပစ္စည်းလိုဖြစ်နေကြတယ်။ မိန်းမယူမယ်ဆိုရင်လဲ ကျန်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ လစာကိုပါတစ်ယောက်တည်းယူထုတ်ပြီး မင်္ဂလာဆောင်လိုက်ကြပေမဲ့ တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်မဆိုးတတ် ကြပါဘူး။ ၂၀၀၀ခုနှစ်ဝန်းကျင်လောက်က ရန်ကုန်မြို့ဗိုလ်ချုပ်ဈေးသစ် (ယခင်လေဟာပြင်ဈေးဟောင်း) အနီး ကွက်လပ်မှာ မျက်မှန်အနက်တတ်ထားသူ မျက်မမြင်တဦးက ဝါးဆစ်ပိတ်တွေကို ပတ်ဝိုင်းတီးသလိုသံစဉ်နဲ့တီးပြီး ခြေနှစ်ဖက်ပြတ်နေသူက မယ်ဒလင်တီးလို့ သီချင်းသီဆိုဖျော်ဖြေနေတာကို လူအများဝိုင်းအုံလို့ နားထောင်နေကြ ပါတယ်။ နတ်ရှင်နောင်ရဲ့စစ်ချီသီချင်းကို အသံကောင်းကောင်းနဲ့ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သီဆိုတီးခတ်နေတော့ သူတို့ရှေ့မှာ ချထားတဲ့ခွက်ထဲမှာလဲ ပြည်သူ့မေတ္တာသဒ္ဒါကြေး ငွေအသပြာတွေပြည့်လျှံလို့နေကြပါတယ်။ “မြင်စေချင်လွန်းလှသည်၊ တောင်တန်းပြာ စစ်စခန်းမှာ ကျောပိုးအိပ်ကိုလွယ်သည်....” လွမ်းစရာ့တေးသံ သီကျူးလို့ ခွက်စွဲတောင်းရမ်းစားသောက်နေကြရတဲ့သူတွေကတော့ ခလရ(၃၆)၊ တပ်ခွဲ(၃)မှ တပ်ကြပ်စိုးမြင့် (ခြေနှစ်ဖက်ပြတ်နေသူ)နှင့် ဒုတပ်ကြပ် မင်းသူ (မျက်စိနှစ်ဖက်စလုံးကန်းနေသူ) တို့ရဲ့ရင်နင့်ဖွယ်အဖြစ်ကို မြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ မင်္ဂလာဒုံစစ်ဆေးရုံ၊ နလံထဆေးရုံမှာ နှစ်ရှည်လများ ဆေးကုသခံနေရလို့ လစာနဲ့ရိက္ခာ မရတော့ဘဲ နောက်တန်းကျုံပျော်မြို့ တပ်ထဲမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ မိန်းမနဲ့ခလေးတွေကို ပိုက်ဆံပြန်ပို့ပေးဖို့နဲ့ ဆေးဘိုး ဝါးခ တို့အတွက် အသက်မသေသရွှေ့ အမြဲတန်း လုပ်ကိုင်ရမဲ့ ရေရှည်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်ကို လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်နေကြတာတဲ့။
“ငါ့မှာက ခလေး(၄)ယောက်နဲ့ တပ်ကထွက်ရင် ဘာလုပ်ကိုင်စားလို့ရမှာလဲ၊ ကျန်းမာရေးကလဲ မကောင်းဘူး။ မင်းတို့လိုလဲ ပညာမတတ်ဘူး။ နေစရာအိမ်လဲမရှိဘူး။ သေချင်လဲသေပါစေတော့ တပ်ထဲမှာပဲ ဆက်နေပါ တော့မယ်” ဆိုတဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းတဦးဖြစ်သူ ကပစ(၉)၊ ညောင်ခြေထောက်(ပဲခူးတိုင်း၊ ပန်းတောင်းမြို့နယ်) ကတပ်သားကြီး ဝင်းမြင့်ရဲ့ညီးတွားညီးညူသံကို ကြားယောင်မိနေပါသေးတယ်။ သူတို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်း ထုတ်လုပ်တဲ့တပ်က ကျည်ဆံ၊ အမြောက်ဆံ၊ ဗုံးဆံတွေကို ထုတ်လုပ်ရတာဆိုတော့ ယမ်းမှုံ့တွေကြားမှာနေရ တယ်။ သူတို့အလုပ်ကိုကယမ်းစပ်ရတဲ့ အလုပ်။ လူကြီးတွေလာစစ်ဆေးတဲ့ အချိန်မှာဘဲ နှာခေါင်းစီးဝတ်စုံတွေကို မြင်ရတယ်။ ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာတော့ ယမ်းမှုံ့တွေက နှာခေါင်းကတဆင့် အဆုတ်ထဲမှာ ယမ်းတိုက်တခုလို ပြည်လျှံနေတာဘဲ။ ငယ်ရွယ်စဉ်တုံးကဆိုရင် ယမ်းနံ့မရရင်တောင်မှ ထမင်းစားလို့မဝင်၊ အိပ်လို့မပျော်တောင်မှ ဖြစ်တတ်တယ်။ စစ်သက်လေးရလာတော့ တီဘီအဆုတ်ရောဂါကနေ အဆုတ်ကင်ဆာရောဂါတွေထိ ဖြစ်ကုန်တယ်။ တီဘီရောဂါအရှိန်မြင့်လို့ မိတ္ထီလာကူးစက်ရောဂါဆေးရုံကို သွားရောက်ဆေးကုသမဲ့အချိန်မှာ တပ်ကထွက်ဖို့ အကြံပေးပေမဲ့ အဆုတ်ကင်ဆာနဲ့ပဲ သေသွားတဲ့အထိတပ်ထဲမှာနေသွားခဲ့တယ်။
ရန်ကုန်မြို့လည်ခေါင် တိုက်ကြိုတိုက်ကြားတွေမှာ လုံခြုံရေးယူရတဲ့ စုတ်ပြတ်သတ်နေသော ခြေလျင်စစ်သား ရဲဘော်လေးများကိုတွေ့မြင်ရတတ်ပါတယ်။ တနေ့ ညောင်နာနာရဲဘော်ခပ်ငယ်ငယ်လေးတဦးကို စစ်ဗိုလ်အရာရှိ တဦးက ပါးရိုက်ထိုးကြိတ်နေတာကို ဆူးလေဘုရားအနီး (၃၂)လမ်းအောက်ဘလောက်မှာတွေ့လိုက်ရတယ်။ စုံစမ်းမေးမြန်းကြည့်တော့ နောက်တန်းမှော်ဘီတပ်ထဲက မိန်းမလိုက်လာတာကိုတွေ့လို့။ တာဝန်ထမ်းဆောင် နေစဉ်မှာ စစ်ဆင်ရေးသတင်းပေါက်ကြားတယ်ဆိုတဲ့ ပုဒ်ထီး၊ပုဒ်မတွေတပ်ပြီး ရဲဘော်လေးကို ဆုံးမနေလိုက်တာ မျက်နှာတခုလုံးကို ဖူးယောင်လို့။ သူတို့တပ်ကလဲ VIP လူကြီးများလုံခြုံရေးနဲ့ ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာရှိတဲ့ အဖျက် သမားများကို ခြေမှုန်းရေးအတွက် ဆိုဘဲ။ ရန်ကုန်မြို့ထဲနဲ့ မှော်ဘီမြို့ဟာ သိပ်မဝေးပေမဲ့ မိသားစုနဲ့မတွေ့ရတာ လနဲ့ချီနေပြီ၊ ခုလဲအငယ်ကောင်နေမကောင်းလို့ ဆေးဘိုးဝါးခအရှာထွက်ဖို့ကိစ္စကို လာတိုင်ပင်တာ။ ခုနက ဆုံးမလိုက်တဲ့ တပ်ခွဲမှူးရဲ့ကတော်ကတော့ နေ့တိုင်းဘဲ ကိုယ်ပိုင်ကားကို ကိုယ်တိုင်မောင်းလို့ လာတွေ့ပြီး လင်တော်မောင်ကိုကို့အတွက် အရပ်ဘက်နေရာကောင်းကောင်းပြောင်းရွှေ့ရဖို့ တိုင်းမှူးအဘရဲ့ ကတော် မမအတွက် စိန်တဆင်စာဝယ်ကန်တော့ထားတယ်ဆိုပါလား။ အရပ်ထဲမှာ ဒီမိုကရေစီအော်နေပေမဲ့ တပ်ထဲမှာတော့ ရှင်ဘုရင်စနစ်ပရေသရာဇ် ခေတ်စားနေပါတယ်။ တပ်ရင်းမှူး၊ တပ်ခွဲမှူးတို့ရဲ့အိမ်မှာ အကြပ်၊ ရဲဘော်တွေရဲ့ မိန်းမတွေဟာ ထမင်းချက်၊ ဟင်းချက်၊ အဝတ်လျှော်၊ ကြမ်းတိုက်နဲ့ အိမ်ဖေါ်အလုပ်ကို လုပ်နေ ကြတာလင်တော်မောင်ကိုကိုတို့ ရာထူးတက်ဖို့၊ နေရာကောင်းရဖို့အရင်းအနှီးလုပ်နေကြရတာ။ ခပ်ငယ်ငယ်၊ လှလှပပမိန်းမကလေးများကတော့ အဘတို့ဆီမှာ ခြေတော်အတင်ခံလို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရင်းလိုက်ကြတာ လင်မယား ချင်းရန်ဖြစ်တော့မှဘဲ “နင်ရာထူးတက်နေတာ၊ နင်တော်လို့မဟုတ်ဘူးအကောင်ရဲ့၊ ငါ့ဟာကောင်းလို့၊+++” မကြားဝံ့ မနာသာဖြစ်ရပ်မှန်တွေကို ခင်းကျင်းပြသကြတာ ယိုသူမရှက်ပေမဲ့၊ မြင်သူကတော့အတော်ရှက်မိပါရဲ့။
ပရေသရာဇ်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေသာမက သူတို့ရဲ့သမီးတွေကလဲ အကဲပြိုင်လိုက်ကြသေးတယ်။စတန့်ထွင်လို့ နန့်ချင်ကြတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ရဲ့သမီးကြီးက လင်တော်မောင်ဗိုလ်မှူးဆရာဝန်ကို အလိုက်ပေးကွာပြီး “ထူးကုမ္ပဏီ” သူဌေးလေး ကိုတေဇကို တရားဝင်ယူဖို့ ကြိုးစားပေမဲ့ ကွယ်ရာမှာနှာခေါင်းရှုံ့ပြီး လူပြောစရာ ဖြစ်မှာစိုးလို့ တပ်ချုပ်ကြီးကခွင့်မပြု တော့ လင်မယားအဖြစ်တရားမဝင်ပေမဲ့ အတူတူနေ၊ အတူတူအိပ် Living together ပေါ်တင်ဘဲနေလိုက်တယ်။ တပ်ချုပ်ကြီးသမီး အငယ်မရဲ့ စိန်စီတဲ့ည မင်္ဂလာဆောင်ကတော့ တိုင်းသိ ပြည်သိသာမကဘဲ ကမ္ဘာသိတဲ့အထိ လဘ်ပေးလဘ်ယူ လှည်းကျိုးထမ်းတဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်။
၁၉၈၈ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံမှာ တပ်မတော် ကြည်း၊ရေ၊လေ တပ်မတော်သားများ ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာ ကလဲ ကမ္ဘာအသိပါဘဲ။ ခလရ(၁၆)လေထီးတပ်က ရဲဘော်တွေဟာ ကြည်းတပ်ကို ကိုယ်စားပြုခဲ့ကြသလို သံလျှက်စွန်း၊ ဧရာဝတီရေတပ်စခန်းဌာနချုပ်(ဧရခ)က ရဲဘော်တို့ဟာ ရေတပ်ကို ကိုယ်စားပြုခဲ့ကြပြီး ပြုပြင်ထိမ်းသိမ်း ရေးလေတပ်စခန်း (လပထ)ကရဲဘော်တွေဟာ တပ်မတော်(လေ)ကို ကိုယ်စား ပြုခဲ့ကြ တာတွေဟာ ခိုင်မာကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓါတ်တွေဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ထိဆိုရင် အမြင်မှန်ရလို့ နွေးထွေးတဲ့ပြည်သူ့ ရင်ခွင်မှာ လာရောက်ခိုလှုံတဲ့ တပ်မတော်သား စစ်သည် အမြောက်အများဒုနဲ့ဒေးရှိနေပါတယ်။ ရဲဘော်တို့ နေ့စဉ် ရွတ်ဆိုနေကြတဲ့ သစ္စာဓိဌာန်(၄)ချက်ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်အနှစ်သာရနဲ့လဲကိုက်ညီလို့နေပါတယ်။
- ငါတို့သည် နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားတို့၏သစ္စာကို စောင့်သိရိုသေပါမည်။
- ငါတို့သည် ကျဆုံးလေပြီသော တပ်မတော်သားတို့၏ သစ္စာကိုစောင့်သိရိုသေပါမည်။
- ငါ့အားအထက်မှပေးအပ်သောအမိန့်နှင့် တာဝန်ကို ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်ပါမည်။
- ငါ့နိုင်ငံတော်၊ ငါ့နိုင်ငံသား၊ ငါ့တပ်မတော်အတွက် ငါ၏အသက်ကိုစွန့်လွှတ်ရန် အဓိဌာန်ပြုပါသည်။
ရဲဘော်တို့ အပြန်အလှန်စဉ်းစားမိကြရဲ့လား။ ဆင်းရဲမွဲတေနေသောနိုင်ငံတော်၊ ငတ်ပြတ်ဘိုက်မှောက် နေကြသော နိုင်ငံသားများနှင့် ကျဆုံးလေပြီးသော၊ မကျဆုံးသေးဘဲ ဂျိုင်းထောက်နှင့် တပ်မတော်သား ရဲဘော်တို့၏ သစ္စာကို အမှန်တကယ်စောင့်သိရိုသေနေကြပြီလား။ အဖန်ငါးရာငါးကမ္ဘာ ကံကြီးထိုက်စေ မဲ့ အဇာတသတ်အမိန့်အာဏာများကို ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်ကြရမှာလား။ ရတောင့်ရခဲတဲ့ လူ့ဘဝမှာ အဘိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ရဲဘော်တို့ရဲ့အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ဘယ်သူတွေအတွက်စွန့်လွှတ်ထိုက်ပါသလဲ။ အမှန်တရားသစ္စာစူးမဲ့ ကုသိုလ်၊အကုသိုလ်အတိမ်အနက်ကို ကောင်းကောင်းစဉ်းစားကြစေချင်တယ်။ အချိန်မနှောင်းသေးပါဘူး။ စစ်လေ့ကျင့်ရေးကျောင်းများမှ စစ်ဆင်ရေးစစ်မြေပြင်များအထိ ချွေးထွက်များ မှ သွေးထွက်နဲမဲ့ ဆောင်ပုဒ်များကို အမှတ်ရသတိရစေချင်ပါတယ် ....
- လေ့ကျင့်ရင်းတိုက်၊ တိုက်ရင်းလေ့ကျင့်
- စည်းရုံးရင်းတိုက်၊ တိုက်ရင်းစည်းရုံး
- တစ်၊ နှစ်၊ သုံး၊ လေး .....ပြည်သူ့စစ်သား
- ပြည်သူ့စစ်သား ...........ပြည်သူ့စစ်သား
- ပြည်သူ့စစ်သား .......... ဘယ်သူ့အတွက်လဲ၊ ဘယ်သူ့အတွက်လဲ.....ဘယ်သူ့အတွက်လဲ....။
posted by မြင့်ဇေ @ 7:59 AM 1 comments
သူချစ်ကြောင်းပြောပြီး သုံးရက်ကြာတော့ ကျမတို့နှစ်ယောက် ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွားကြတယ်။ ချစ်သူဖြစ်ပြီးတဲ့ နောက် ကျမတို့ စကားတွေ အများကြီး ပြောဖြစ်ကြတယ်။ မမြင်ရသေးတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရယ်၊ ကျမတို့နှစ်ဦးရဲ့ အတူနေထိုင်ရမယ့် ဘ၀အကြောင်းရယ်။ အို.... အများကြီးမှ အများကြီးရယ်ပါ။ ကျမက တကယ်ဆို ဘာမှ မသိတဲ့ တောင်ပေါ်သူတယောက်ရယ်ပါ။ ဒါပေမယ့် သူနဲ့ ချစ်သူတွေဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်း နည်းနည်းသိလာတယ်။ ဥပမာ သူ ပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ တော်လှန်ရေးအကြောင်းမျိုးပေါ့။ ကျမသိခဲ့တာက စစ်ပွဲတွေ ဖြစ်နေတယ်။ အစိုးရနဲ့ ကျမတို့ လူမျိုးတွေ ဘာကြောင့်စစ်တိုက်နေရလဲဆိုတဲ့အရာကို သိလာရတယ်။ ကျမတို့ကို အစိုးရစစ်တပ်က ဖိနှိပ်တာကို ရေးရေးလေး မြင်လာတယ်။
တည ကျမအကတိုက်ပြီး အိမ်ပြန်တော့ သူလိုက်လာတယ်။ ထူးထူးဆန်းဆန်း အဲဒီညမှာ ကျမတို့ရိုးရာ အက အကြောင်းကိုသူက ပြောတယ်။
`ကိုယ်တို့ဘ၀ကို နားမလည်သူတွေက ကိုယ်တို့ရဲ့ ရိုးရာအကဟာ စစ်လိုလားတဲ့ အကလို့ ဆိုကြတယ်။ ကိုယ်က တော့ ကိုယ်တို့ဘ၀နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ အကလို့ လက်ခံထားတယ်။ အားမူပဲ စဉ်းစားကြည့်ဦးလေ။ ဒီကထဲက ကကွက်တွေဟာ ကိုယ်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘ၀မှာရှိနေတဲ့ အရာတွေချည်း မဟုတ်ဘူးလား။ တောင်ယာခုတ်တာ၊ မောင်းထောင်းတာ၊ ဆူးထိုး၊ ဆန်ပြာတာ တွေက အားမူနေ့တိုင်း ကိုယ်တိုင် လုပ်နေရတာပဲ။ ဒိုင်းအက လို့ နာမည်ပေးထားတာကိုက ကိုယ်တို့ တော်လှန်ရေး ဘာကြောင့်လုပ်နေရတယ် ဆိုတာ ဖော်ပြနေမှုလို့ စဉ်းစားမိတယ်။ ဒိုင်းဆိုတာက ကိုယ့်ကို ရန်ပြုလာရင် ခုခံတဲ့ အရာမဟုတ်လားအခု ကိုယ်တို့ စစ်တိုက်နေကြ ရတယ်။ဘိုးဘွားစဉ်ဆက် ကိုယ့်ဒေသမှာကိုယ် အေးအေးချမ်းချမ်း လုပ်ကိုင်စားသောက်ခဲ့ကြတာ။ ဒါပေမယ့် စစ် အာဏာရှင် တွေက ကိုယ်တို့ရဲ့ဘ၀တွေကို မငြိမ်းချမ်းအောင် ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေ အမျိုးမျိုးနဲ့ ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်။ ဒီလိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေကို စစ်တပ်က သေနတ်သုံးပြီးလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ ကိုယ်တို့ဒေသအပါအ၀င် တ နိုင်ငံလုံးမှာ ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေပါ။ ကိုယ်တို့ ပထမက လူမျိုးကြီးဝါဒအရ ဖိနှိပ်တာလို့ မြင်ခဲ့ကြတယ်။ ၈၈ အရေးတော်ပုံ နောက်ပိုင်းမှာ ကိုယ်တို့နားလည်လာတယ်။ လူမျိုးရေးအရ အဓိက မဟုတ်ပဲ ဒီ ဖိနှိပ်မှုတွေဟာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို မြင်လာကြတယ်။ ကိုယ်တို့ တော်လှန်ရေးစစ်ကြောင်းတွေ ရွာထဲ ၀င်လာကြရင် တခါတလေမှာ ကျောင်းသားတပ်တွေလည်း ပါလာကြတယ် မဟုတ်လား။ သူတို့ထဲမှာ အောက်ကျင်းက ဗမာတွေများတယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင် အောက်ကျင်းမှာ ဖိနှိပ်မှုကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း လုပ်ခဲ့ပေမယ့် စစ်တပ်က သေနတ်နဲ့ ဖြေရှင်းခဲ့တယ်။ အဲဒီကျတော့ သူတို့လည်း ကိုယ်တို့ဒေ သတွေဆီ ရောက်လာပြီး ဖိနှိပ်မှုကို ခုခံဆန့်ကျင်ဖို့အတွက် လက်နက်ကိုင်ခဲ့ရတယ်။ ဒိုင်းဆိုတာဟာ ကိုယ့်ကိုယ် ကို ကာကွယ်ဖို့ဖြစ်သလို ရန်သူကို အနိုင်တိုက်ဘို့အတွက်လည်း ပြင်ဆင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ ကိုယ်တို့ တော်လှန် ရေးရဲ့ အခြေခံဟာလည်း ဒိုင်းရဲ့သဘောအတိုင်းပါပဲ။ ကိုယ့်ကို ဖိနှိပ်နေမှုတွေကို ခုခံပြီး ဖိနှိပ်မှုတွေကို ပျောက် ကွယ်သွားအောင် တိုက်ရတာဟာ တော်လှန်ရေးရဲ့ သဘောပဲ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်က ဒိုင်းအကကို ကိုယ့်တို့ရိုးရာ အကဖြစ်တဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူတယ်။
ရှည်လျားစွာပြောနေတဲ့ သူ့မျက်နှာကို ကျမငေးရင်း ကြည်နူးနေမိတယ်။ ပြီးတော့ ကျမချစ်သူ လုပ်နေတဲ့ တော် လှန်ရေးအကြောင်းကို အရင်ကထက် နည်းနည်းပိုနားလည်လာသလို သူ့ကိုလည်း ပိုပြီးတန်ဖိုးထားလာမိတယ်။
အဲဒီလိုနဲ့ သူစစ်ကြောင်းတွေ ခရီးတွေ ထွကလိုက် ပြန်လာလိုက်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် စကားပြောပွဲတွေ ပြေ လည်တော့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ လည်းပိုပိုပြီး ကျယ်လောင်လာတဲ့အချိန်။
ကျမဘာသာရေးပွဲတော်တခုကို သွားတော့ သူနဲ့တွေ့တယ်။ ပွဲတော်မှာ လျှောက်လည်ရင်း `ကိုယ်တို့တော့ နီးရတော့မယ်´ သူကပြောတော့ `တကယ်လား၊ သိုင်´ `တကယ်ပေါ့ အားမူရယ်၊ ကိုယ်တို့ ခေါင်းဆောင်တွေ စကားပြောတာနောက်လလောက်ဆိုရင် တရားဝင်ဖြစ်တော့မယ်´တဲ့။ `တရားဝင်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ ကိုယ့်ရွာကို ခွင့် ပြန်ပြီး မင်းကို လက်ထပ်နိုင်အောင်လုပ်မယ်။ ပြီးတော့ အမိုးနဲ့အပါးဆီကို ပြန်လာပြီး အားမူကိုလာတောင်း မယ်လေ´ ကျမအဲဒီညက သူ့စကားတွေကို ပြန်စဉ်းစားရင်း တော်တော်နဲ့ အိပ်မပျော်နိုင်ခဲ့ဘူး။
အဲဒီ ပွဲတော်အပြီး တရက်၊ နှစ်ရက်ကြာတော့ သူတို့ ခရီးထွက်သွားတဲ့ သတင်း ကျမရတယ်။ ပွဲတော်မှာ သူနဲ့ တွေ့ဆုံခြင်းဟာ နောက်ဆုံးဆိုတာကို ရွာပြန်ရောက်ပြီးတော့ ကျမသိလိုက်ရတယ်။
ကြားကြားချင်း သူ ကျမကို ခွဲခွာသွားခဲ့ပြီဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မယုံနိုင်ခဲ့ဘူး။
သူ့ကို ချစ်တာကလွဲလို့ ဘာမှ မသိတဲ့ ကျမကို တော်လှန်ရေးနဲ့ ဘ၀အကြောင်း ရှင်းပြခဲ့တဲ့ သိုင် တိုက်ပွဲမှာ ကျသွားခဲ့ပြီလို့ သူ့သူငယ်ချင်းအဖြစ်အပျက်ကို ရှင်းပြနေတဲ့ ဆေးမှူးလေးရဲ့ စကားသံကို ကျမနားက ကြားတ ချက် မကြားတချက်။
ဆေးမှူးလေးပြောပြတာက အထက်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ စစ်တပ်ရဲ့ နှစ်ဘက်ဆွေးနွေးပွဲကို ယုံပြီး သူတို့ စစ် ကြောင်း ရွာတရွာရောက်တော့ ရန်သူကို ဆက်သွယ်တယ်။ သူတို့ရဲ့ ယုံကြည်မှုကို အခွင့်အရေးယူပြီး ရန်သူက နောက်နေ့မနက်မှာဘဲ ၀င်တိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ သိုင်အပါအ၀င် ရဲဘော်နှစ်ဦး ကျဆုံးသွားတယ်.... တဲ့။
ဘယ်တော့မှ မေ့မှာ မဟုတ်တာက သိုင် ကျမကို မှာခဲ့တဲ့ စကားပါ။
`အားမူကို ရှင်းပြပါ။ မငိုပါစေနဲ့။ပြီးတော့ ဒါဟာ ရန်သူကို အကြွင်းမဲ့ သွားယုံမိတဲ့ အမှားကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပေးပါ။ ကျန်တဲ့ ရဲဘော်တွေလည်း ပြောပေးပါ။ ရန်သူကို ဘယ်တော့မှ အကြွင်းမဲ့ မယုံနဲ့´
ဆိုတာပါပဲ။ သိုင်ပြောတဲ့အတိုင်း ကျမ မျက်ရည်မကျခဲ့ပါဘူး။ ပြီးတော့ ဘ၀နဲ့လဲပြီး သူပေးခဲ့တဲ့ အသိကြောင့် ရန်သူကို ဘယ်တေ့ာမှ အကြွင်းမဲ့ ယုံနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် ရန်သူက ပေးမယ့် ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလည်း ကျမ အကြွင်းမဲ့ ယုံနိုင်တော့မှာတဲ့လား။
ကျမနားလည်နေတာက သူပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေဟာ ကျမတဦးတည်းအတွက် မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါ။
အခုတော့ မျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ မြို့ပြကို တက်သွားခဲ့ကြပြီ။ ကျမလိုက်မသွားခဲ့ပါဘူး ..... သိုင်။ ညအမှောင်ထဲမှာ တရွာလုံး တိတ်ဆိတ်နေတယ်။ အစိုးရနဲ့အတူ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မယ့် အခမ်းအနားဆီ ရွာက လူတော် တော်များများ လိုက်သွားကြတယ်။ မီးရောင်တွေလင်းနေမယ့် မြို့ပြ တခုဆီရောက်နေတဲ့ ကျမတို့ ဒေသခံတွေ ကတော့ မြို့ပြရဲ့အရှိန်အ၀ါတွေကြောင့် ဘ၀အမောတွေကို ခေတ္တ မေ့လျော့ပြီး ပျော်ရွှင်နေကြမှာလား။ ဒါမှ မဟုတ် စိုးရိမ်ထိတ်လန့် နေကြမှာလား။
ကျမ ဒါတွေ မတွေးဘူး။
တွေးနောတာက ကျမသွားမကဖြစ်တော့တဲ့ အကနဲ့ သိုင့်အကြောင်းကိုပါ။ သိုင်က ကျမတို့ရိုးရာအကကို အရမ်း မြတ်နိုးသူမဟုတ်လား။ ဒါကြောင့်သူ့ကို သတ်သွားတဲ့ ရန်သူရဲ့ ရှေ့မှာ ကျမဘယ်လိုမှ မကနိုင်ဘူးဆိုတာ ကျမနဲ့ သိုင်ပဲ နားလည်နိုင်မှာပါ။ ။
ဒိုင်းအက = ကယန်းလူမျိုးစု (ကယားပြည်နယ်အတွင်း) ၏ ရိုးရာအက
သိုင် = ကယန်းအခေါ်အဝေါ်အရ ပဉ္စမမြောက်သား
အားမူ = ကယန်းဘာသာအရ ပထမဆုံးသမီးအားခေါ်သောစကားလုံး
အတွဲ ၂ ၊ အမှတ် ၃
အောက်တိုဘာ - နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၂
posted by မြင့်ဇေ @ 2:02 AM0comments
posted by မြင့်ဇေ @ 9:00 PM 1 comments
posted by မြင့်ဇေ @ 10:23 PM0comments
နောက်ကျော မလုံတဲ့ကိစ္စတွေလည်း မဲ့ပေါ့။ ။
posted by မြင့်ဇေ @ 1:50 AM0comments
posted by မြင့်ဇေ @ 12:40 AM0comments
ရင်နှစ်ခြမ်း အစဉ်ကွဲလို့။ ။
နအဖကတော့ ညောင်နှစ်ပင်ကို ပြည်ဖုံးကားချတော့မယ်လို့ ဆိုနေပါပြီ။
ဒီစခန်းသိမ်းပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပက စိတ်ဝင်စားသူတွေဟာ ကိုယ့်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ် အမျိုးမျိုး ဝေဘန် သုံးသပ်နေကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ကြိုတင်မှန်းဆနေကြတာလည်း မနည်းပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ကျနော့် သဘောဘယ်လိုရှိသလဲ လို့ တီးခေါက်သူများလည်း ကြုံ၇လို့ ငါလည်း ငါ့အမြင်တော့ ပြောဦးမှ ဆိုပြီး ဒီဆောင်းပါးကို ရေးလိုက်ပါတယ်။
ဗိုလ်သန်းရွှေ အသက် ၆၀ မပြည့်ခင်ကတည်းက စပြီး န၀တ-နအဖ တို့ ၁၄ နှစ်လောက် ဆွဲလုပ်နေခဲ့တဲ့ ညောင်နှစ်ပင်ညီလာခံကို ဘာကြောင့် အခုကျမှ စခန်းသိမ်းရတာလည်း ဆိုတာ စပြောချင်တယ်။ တကယ်က သူတို့အနေနဲ့ အရင်လို ဇာတ်မျောကြီးဆက်ကနေရင်လည်း ရနေသေးတာပဲ မဟုတ်လား။ နိုင်ငံတကာက ဖိအားဆိုတာလည်း သူတို့အတွက် မှုလောက်စရာ အဆင့် မရောက်သေးပါဘူး။ ဒါနဲ့များဘာကြောင့် စခန်းသိမ်းစကားပြောလာရတာလဲ စဉ်းစားစရာ ရှိပါတယ်။
တကယ်တမ်း နအဖအပေါ် ဖိအားပေးနေတာက ဇရာနဲ့ မရဏပါ။ ဗိုလ်သန်းရွှေ ဆေးရုံက ဆင်းလာတာ ဘာမှ မကြာသေးပါဘူး။ အခုသူနေကောင်းတယ်ဆိုတာကလည်း လူအိုကောင်းကောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်စိုးဝင်းဟာ စင်္ကာပူမှာ သေမင်းနဲ့ ဈေးဆစ်နေရတယ်။ ဗိုလ်ရွှေမန်းကျန်းမာရေးကိုလည်း အမျိုးမျိုး ပြောသံတွေ ကြားနေရပြီး ဗိုလ်သိန်းစိန်ကတော့ နားပါရစေတော့လို့ချည်း ပြောနေတဲ့ ယဲ့ယဲ့လူပါ။ အရင်လိုအချိန်ဆွဲနေရင် ညောင်နှစ်ပင် စခန်းမသိမ်းနိုင်မီ နအဖခေါင်းဆောင်တွေ စခန်းသိမ်းကုန်မယ့် အလားအလာတွေ မြင်တွေ့နေရပါတယ်။
ဒါနဲ့တဆက်တည်း နောက်တက်လေးများရဲ့ နောက်ကတွန်းပြီး ဖိအားပေးနေတဲ့ ဖိအားကိုလည်း မစဉ်းစားလို့မရဘူး။ ၀န်ကြီးဌာနတွေနဲ့ ၀မ်းချရတာလည်း ဆက်တိုးစရာ မရှိတော့ဘူး။ ဒီတပ်ထဲမှာက ထိပ်တန်းရောက်လေ၊ ရာထူးကြီးလေ စားရလေ၊ ချမ်းသာလေဆိုတာ အားလုံးကသိနေပါတယ်။ န၀တ-နအဖ စစ်အုပ်စုဟာ တပ်တွင်းမှာ အလှည့်နဲ့စားတဲ့ စနစ်ကို ထူထောင်ဖို့တော့ ကြိုးစားပါရဲ့။ ဒါပေမဲ ရွှေမန်ကျည်း ဖြစ်ရင်သာ တဆစ်စီ ဝေစားနိုင်မယ်။ ထိပ်ပိုင်းနေရာကို တော့ ဝေမစားနိုင်ပဲ ဖြစ်နေပါတယ်။
နောက်တတန်းတည်း အရေးပါတဲ့ ကိစ္စက `ငြိမ်း´အဖွဲ့ တွေရဲ့ ပြဿနာပါ။ သေဘော်ညှိတဲ့ အနေနဲ့ ညောင်နှစ်ပင်ထဲ ဆွဲထည့်ထားပေမဲ့ သူတို့ထင်သလောက် မီးမသေတာတွေ့ရလို့ အဲဒါတွေကို မီးသေအောင်လုပ်ဖို့လည်း လိုနေသေးတယ်။ သူတို့ကို တလျှောက်လုံး ဖွဲ့စည်းပုံစကားနဲ့ ချွေးသိပ်နေခဲ့ရတာ မဟုတ်လား။
နောက်တချက်က နအဖမှာ ဂမ်ဘာရီကို ကြိုးလျှော့ပေးလိုက်၊ ကြိုးပြန်တင်းလိုက်နဲ့ ဆက်ဆံပြီး ကုလသမဂ္ဂကို အမြှင်မပြတ် အောင် လုပ်နေရတဲ့ တာဝန်လည်း ရှိနေပါတယ်။ ဒီအတွက် ဒီခြေလှမ်းဟာ အများကြိး အကျိုးရှိမယ်လို့ သူတို့ တွက်မှာပါ။ သူတို့ဟာ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ ကိစ္စမှန်သမျှကို ဒီအကွေ့ဒီတက်နဲ့လှော် ဆိုသလို ဆေးမြီတိုနဲ့ချည်း ဖြတ်သန်းခဲ့တာပါ။ သူတို့အနေနဲ့ လက်ရှိကြုံနေရတဲ့ အခက်အခဲကို ကျော်ရင် ရပြီဆိုတာမျိုးနဲ့ စခန်းသွားနေခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ အလားတူပဲ ဒီလို လုပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် အိမ်နီးနားခြင်းနိုင်ငံတွေက နားပူနားဆာ လုပ်နေတာကို တစုံတရာ သက်သာအောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့လည်း တွက်ဟန်တူပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အီးယူ၊ ဂျပန်စတဲ့ နိုင်ငံမျိုးတွေ။ အားလုံးက ဒါကိုပဲ မေးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ပြလိုက်ခြင်းအားဖြင့် အဲဒီနိုင်ငံတွေထဲက တချို့ ဟာ ဆိုရင် နအဖက ဟန်ဆောင် လောက်လုပ်ပြလိုက်ရင်ကိုပဲ ကျေနပ်သွားမယ့် သဘောလည်း ရှိနေတယ် မဟုတ်ပါလား။
ဒီနေရာမှာ စဉ်းစားစရာ အချက်လေးတချက်တွေ့နေရပါတယ်။ အဲဒါက ညောင်နှစ်ပင် စမယ့် ညီလာခံအချိန်ကို ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်နေ့လို့ သတ်မှတ်ထားတာပါဘဲ။ အာဇာနည်နေ့နဲ့ တမင်ကပ်ပြီးရွေးထားတာ ဘာကြောင့် ပါလဲ။ ဒီတခါ ဇူလိုင် ၁၉ ရက်ဟာ အနှစ် (၆၀)တင်းတင်းပြည့်တဲ့ နှစ်ပတ်လည်မို့ ထူးခြားချက်လည်း ရှိနေပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဗမာပြည်ရဲ့ ပထမဆုံး ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ကို ဂုဏ်ပြုချင်တယ် အထင်ခံချင်လို့ ဒီရက်ကို ရွေးတာလား။ဒါမှမဟုတ် ဒီလိုရက်မှာ သူတို့ရဲ့ ညောင်နှစ်ပင်ကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြလာမှာကို ကြိုတားတာလား။ ဒီနေ့ရက်ကို ရွေးခြင်းအားဖြင့် ဒေါ်စုတို့ကို နိုင်ငံရေးအရ ခွေ ထားလိုက်နိုင်မယ်လို့ တွက်ထားလေသလား။စဉ်းစားစရာတွေကတော့ အများကြီး။
ဒီညီလာခံကနေ `ကန့်ကွက်သူမရှိတဲ့´ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ အများကြီးပေါ်လာမှာကတော့ သေချာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ `ငြိမ်းအဖွဲ့ တွေ ´ တင်ထားတဲ့ ကိစ္စမျိုးဟာ ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေတဲ့ ပြဿနာဆိုတော့ နအဖဘယ်လိုကိုင်တွယ်မလဲ စဉ်းစားစရာပဲ။
သေချာတာက ဒီညီလာခံ အဆုံးသတ်တာဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ မကျေနပ်မှုတွေ၊တိုင်းပြည်တွင်း မတည်ငြိမ်မှုတွေကို လျော့နည်းပပျောက်သွားစေမှာ မဟုတ်ပဲ ပိုမိုတိုးများလာမယ့်အပြင် ပြည်တွင်းစစ် ပြန်လည် ကြီးထွားလာရေးဆီကိုတောင် ဦးတည်သွားနိုင်ပါတယ်။
posted by မြင့်ဇေ @ 9:27 PM0comments
posted by မြင့်ဇေ @ 9:02 PM0comments
၁. ယဉ်ကျေးလိမ္မာ များထက်သာ အဲ့ဒါဒို့မြန်မာ။
၂. မျိုးကောင်းသားများ မွေးဖွားရာ အဲ့ဒါဒို့မြန်မာ။
၃. ကိုယ်ချင်းစာတရား ထားတတ်တာ အဲ့ဒါဒို့မြန်မာ။
၄. ကူညီဖို့ရာ လက်မနှေးတာ အဲ့ဒါဒို့မြန်မာ။
၅. အညှိးအတေးမကြီးတာ အဲ့ဒါဒို့မြန်မာ။
၆. အမှတ်မရှိ သနားတတ်တာ အဲ့ဒါဒို့မြန်မာ။
၇. အမြဲလိုလို အားနာတတ်တာ အဲ့ဒါဒို့မြန်မာ။
၈. ဘာတွေဖြစ်ဖြစ် ပြုံးနေတတ်တာ အဲ့ဒါဒို့မြန်မာ။
၉. ရှေ့နောက်မတူ အလည်ထိုင်လွဲ ဇွဲမလျှော့တာ အဲ့ဒါဒို့မြန်မာ။
၁၀. အမှားအမှန်မဝေဖန် ခေါင်းငုံ့ခံတာ အဲ့ဒါဒို့မြန်မာ။
၁၁. နဲနဲလုပ်ငြား များများကြွား မှတ်သား အဲ့ဒါဒို့မြန်မာ။
၁၂. ငါနဲ့မူမတူ ငါ့ရန်သူ မှတ်ယူ အဲ့ဒါဒို့မြန်မာ။
၁၃. သူများကောင်းစား မနာလိုပွား အဲ့ဒါဒို့မြန်မာ။
၁၄. သူများအပေါ်ကောင်း အချင်းချင်းထောင်း အဲ့ဒါဒို့မြန်မာ။
၁၅. မဆင်ချင်ပါ အထင်ကြီးတာ အဲ့ဒါဒို့မြန်မာ။
၁၆. ဘယ်လိုနှိပ်စက် မနာတတ်တာ အဲ့ဒါဒို့မြန်မာ။
၁၇. ရှိရှိ၊မရှိရှိ ကြွားဝါတတ်တာ အဲ့ဒါဒို့မြန်မာ။
၁၈. သာပေါင်းညာစား ပြောဆိုတတ်တာ အဲ့ဒါဒို့မြန်မာ။
၁၉. ဟိုဒီအကြောင်းပြ အပျင်းကြီးတာ အဲ့ဒါဒို့မြန်မာ။
၂၀. ရာထူးဂုဏ်သိန် အလွန်မက်တာ အဲ့ဒါဒို့မြန်မာ။
၂၁. ရိုးသားသူများလူ့ငနွား ခေါ်ခံရတာ အဲ့ဒါဒို့မြန်မာ။
၂၂. လေယာဉ်ပိုင်ရှင်ပေါ်လို့လာ အဲ့ဒါဒို့မြန်မာ။
၂၃. ခရက်ဒစ်ကဒ်မသုံးပါ လက်ငင်းရှင်းတာ အဲ့ဒါဒို့မြန်မာ။
၂၄. ဟန်းဖုံး၁လုံး သန်းချီတန်တာ အဲ့ဒါဒို့မြန်မာ။
၂၅. ပုခုံးပွင့်ရှိမှအလုပ်ဖြစ်တာ အဲ့ဒါတို့မြန်မာ။
၂၆. တံခါးဖွင့်စီးပွား ရေလောင်းရတာ အဲ့ဒါဒို့မြန်မာ။
၂၇. ကပ်ပွားသမားများချမ်းသာတာ အဲ့ဒါဒို့မြန်မာ။
၂၈. ကားအဟောင်းတွေ ဈေးကောင်းရတာ အဲ့ဒါဒို့မြန်မာ။
၂၉. တိုရိုတာ မှ ရွှေသာယာ ဖြစ်တာ အဲ့ဒါဒို့မြန်မာ။
၃၀. ၀ပ်သောက်ကားများ ၀န်ကြီးကားဖြစ်လာ အဲ့ဒါဒို့မြန်မာ။
၃၁. လိပ်တက်ကားစီး ၀န်ကြီးမြေး အဲ့ဒါဒို့မြန်မာ။
၃၂. လူကြီးအမျိုးများ ကောင်းကောင်းဝါး အဲ့ဒါဒို့မြန်မာ။
၃၃. စီးပွားဖြစ်ရာ လိုက်လုပ်တတ်တာ အဲ့ဒါဒို့မြန်မာ။
၃၄. ပိုက်ဆံဈေးကျ သုံးမရ အပြုံးမပျက်တာ ဒို့မြန်မာ။
၃၅. စီးပွားပိတ်ဆို့ အမေရိကန်တို့ ဂရုမစိုက်တာ ဒို့မြန်မာ။
၃၆. ရက်ကွက်တစ်ခု ပတ်သုံးခု ဖွင့်လို့ဖြစ်တာ ဒို့မြန်မာ။
၃၇. တောင်သူလယ်သမား ဘိန်းစိုက်စား စီးပွားတက်တာ ဒို့ဗမာ။
၃၈. လူချမ်းသာသား အလုပ်ရှား စီးရီးထုတ်တာ ဒို့ဗမာ။
၃၉. မြန်မာပြည်သား မလေးရှားသွား အလုပ်သမားဖြစ်လာ ဒို့ဗမာ။
၄၀. ပညာတတ်များ ထောင့်ပို့ထား အဲ့ဒါဒို့မြန်မာ။
၄၁. ဖတ်တတ်ယုံလေး သင်ကာပေး ဆိုးရွားနေတာ ဒို့မြန်မာ။
၄၂. ဘွဲ့ရသော်ငြား အလုပ်ရှား မှတ်ထား ဒို့မြန်မာ။
၄၃. ၁၀တန်းအောင်များ နိုင်ငံခြားသွား တက္ကသိုလ်မတတ်တာ ဒို့မြန်မာ။
၄၄. တက္ကသိုလ်သား မှန်ခဲ့ငြား ဖဲရိုက်တတ်တာ ဒို့မြန်မာ။
၄၅. တစ်နှစ်ဆယ်ရက် အဝေးသင်တက် အောင်ချက်ကောင်းတာ ဒို့မြန်မာ။
၄၆. သမိုင်းကြောင်းများ ပုံပြင်လား မှတ်သား ဒို့မြန်မာ။ ကျန်းမာရေးဦးတည်ချက်
၄၇. တစ်နေ့နှစ်ခါ နှစ်လုံးရောဂါ အဲ့ဒါဒို့မြန်မာ။
၄၈. ဆေးဝါးမရှိပါ နယ်ဆေးရုံမှာ အဲ့ဒါဒို့မြန်မာ။
၄၉. အေကိုက်သူများပေါများလာ အဲ့ဒါဒို့မြန်မာ။ အားကစားဦးတည်ချက်
၅၀. ဘောလုံးကန်ပွဲ သောက်ရှက်ကွဲလည်း စိတ်မနာနိုင်တာ ဒို့မြန်မာ။
၅၁. ဘောလုံးပွဲမှာအမြဲသာ သောက်တလွဲဖြစ်တာ ဒို့မြန်မာ။
၅၂. ဗုဒ္ဓသာသနာ ထွန်းကားရာ အဲ့ဒါဒို့မြန်မာ။
၅၃. ကျောင်းကန်ဘုရား ပေါလှတာ အဲ့ဒါဒို့မြန်မာ။
၅၄. အလှုဒါန ရက်ရောတာ အဲ့ဒါဒို့မြန်မာ။
၅၅. နေရာတိုင်းလို လှူစေလို ကောက်ခံတတ်တာ ဒို့မြန်မာ။
၅၆. ကိစ္စပြီးအောင် အရက်လက်ဆောင် ကန်တော့ရတာ ဒို့မြန်မာ။
၅၇. နိဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်း ချဲအတိတ်ကောက်တာ ဒို့မြန်မာ။
၅၈. ချဲပေါက်ဖို့အကြောင်း ဆုတွေတောင်း ဘုရားနားငြီးတာ ဒို့မြန်မာ။
၅၉. နတ်ပန်းမညှိုး ဘုရားပန်းညှိုး စဉ်းစားစရာ ဒို့မြန်မာ။
၆၀. ကြွားဝါဘို့အရေးအလှူပေး ယဉ်ကျေးလိမ်မာ ဒို့မြန်မာ။
၆၁. ဗေဒင်စကား ထင်ယောင်မှား ယတြာချေတာ ဒို့မြန်မာ။
၆၂. များများလှူမှ နိဗ္ဗာန်ရ ထင်ကြ ဒို့မြန်မာ။
၆၃. လော်နဲ့အော်မှစိတ်တိုင်းကျ ဓလေ့ဖြစ်လာ ဒို့မြန်မာ။
၆၄. လှူယောင်ဟန်ထွင် သရုပ်သွင် ပေါတင်လုပ်တာ ဒို့မြန်မာ။
၆၅. ကူညီသယောင် အယောင်ဆောင် မျက်နှာပြောင်တာတို့မြန်မာ
၆၆. ဟိုဒီစပ်စပ် အကုန်တတ် ဆရာများတာ တို့မြန်မာ။
၆၇. မသိလည်း လက်ခံ ၊ နားမလည် လည်း ပြန်မမေးနဲ့ ခေါင်းညိမ့်လက်ခံ လမ်းကြောင်းမှန် မှတ်သား
၆၈. ရုံးကိတ်စများ အခါခါ သွား ၊ ပွဲစား ရှိထား အဆင်ပြေသွား
၆၉. စစ်ကားရိုက်ငြား သရုပ်ဆောင်များ အကယ်ဒမီရတာ ဒို့ဗမာ။
၇၀. မီးမလာဘဲ အမှောင်ထဲ ဖဲရိုက်တတ်တာ ဒို့ဗမာ။
၇၁. ယဉ်ကျေးမှူလည်း မြင့်ခဲ့တာ အဲဒါဒို့မြန်မာ
၇၂. ၂၄ နာရီမီးပျက်နေတာ အဲ့ဒါတို့မြန်မာ...
၇၃. ပိုက်ဆံတောင်းတာ အကျင့်ပါ အဲ့ဒါမြန်မာ့ ၀န်ထမ်းပါ။
၇၄. ရုံဝန်ထမ်းတွေ လက်ဖက်ရည်သောက်တာ တို့ဗမာ. (အကို လက်ဖက်ရည်ဖိုးလေး မစပါဦး..)
၇၅. အသင်းအဖွဲ့ ဖွဲ့လည်း စိတ်ဝမ်းကွဲ ကြာကြာမမြဲတာ တို့ဗမာ
၇၆. သင်္ကြန်တွင်းဆို အသေပျော်တာ ဒို့ဗမာ
၇၇. ၀က်ဆိုက် အများစု ဘမ်းခံရတာ ဒို့ဗမာ
၇၈. ကော်ပီ ( သီချင်း ) ဆိုတာ ဒို့ဗမာ
၇၉. ၃ရက်နဲ့ ဗီဒီယို တစ်ကားပြီးအောင်ရိုက်နိုင်တာ ဒို့ဗမာ
၈၀. ဘစ်ကားပေါ် အထာက်တော်.. ပေါများနေတာ တို့မြန်မာ..
၈၁. လမ်းဘေးတိုင်းမှာ ဆိုင်ကွမ်းယာ တွေ့မြင်နိုင်တာ တို့မြန်မာ..
၈၂. တောင်းစားသူများ လွန်ပေါများ နေ၇ာတိုင်းမှာ တွေ့နိုင်တာ ..
၈၃. လက်ဖက်ရည် ဆိုင်ဆို ကြည့်ကြည့်ပါ အချိန်မရွေး စည်နေတာ ဒို့ဗမာ
၈၄. ကွန်နက်ရှင် စပိမကောင်းတာဟာ..အဲတာ တို့မြန်မာ..
၈၅. ချစ် ကြိုက် ကွဲ ညား ဇာတ်လမ်းများ မရိုးနိုင်ပဲ အားပေးနိုင်တာ ဒို့ဗမာ
၈၆. ကူးခွေထွက်တော့မတရား ၊ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲ အလကားသုံးတော့ တရားတာ ဒို့ဗမာ
၈၇. တရေးနိုးမှ အိပ်မက်ရ မှတ်ဟဥပဒေ။
၈၈. မင်းကောင်း ကြာကြာမခံတာ တို့ဗမာ
၈၉. တို့မြန်မာ..ပြည်သူအများ.... လွပ်လပ်ခွင်.နဲ.ဝေးလို.သွား... အရေးအသားပိတ်လို.ထား...
၉၀. ရှေ့ပြော နောက်လွဲ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ
၉၁. ခန့်အပ်စာရ ရယက ပါဝါပြတာ တို့မြန်မာ။
၉၂. နှစ်အကြာဆုံး ဆောင်ရွက်မယ် စံချိန်တင်အောင်ကွယ် (သိပါတယ်နော်)
၉၃. သူ့အလှည့် သူ့ဂါထာ ငါ့အလှည့် ငါ့ဂါထာ ပေါ်လစီပြောင်းတာ တို့ဗမာ။
၉၄. ဗီတို (လနအသ) နှစ်လုံး အပြိုင်သုံး အပြုံးမပျက် တိုင်းပြည်တွက်
၉၅. ၀ါးလုံးခေါင်းထဲ လ သာမြဲ . . . ဒါ ဒို့ ဗမာပဲ
posted by မြင့်ဇေ @ 8:03 PM0comments
မင်းက အစဉ်အမြဲပွင့်တယ် ချယ်ရီ
posted by မြင့်ဇေ @ 1:54 AM 1 comments
လှိုင်းတွေ၊ မုန်တိုင်းတွေနဲ့ ပြည့်နှက်။
နှစ်ပေါင်းများစွာက အနီ မွေးဖွားရာ
ရင်ထဲက ပဉ္စမနိုင်ငံတော်ထံ အရောက်သွားမယ်၊
ကိုယ့် လိပ်ပြာ ကိုယ်မလုံစေတဲ့
posted by မြင့်ဇေ @ 1:51 AM0comments
ဒုက်ခ၊ ပင်ပမ်းမှု၊ ငွေကြေး၊
ပိတောက်တွေ အကြိမ်ကြိမ် ပွင့်ခဲ့တယ်
ဖြစ်ခဲ့တာ ကြာ ချေ ပေါ့့။
ငါက ဒုတိယနိုင်ငံရောက်နေသူ။ ။
posted by မြင့်ဇေ @ 1:21 AM 1 comments